FBC - Biyyattiin bu’aa olaanaa ‘invastimantii’ hawwachuun galmeessisteef sadarkaa idil-addunyaatti badhaafamte
Biyyattiin bu’aa olaanaa ‘invastimantii’ hawwachuun galmeessisteef sadarkaa idil-addunyaatti badhaafamte
Finfinnee, Sadaasa 12, 2010 (FBC) Itiyoophiyaan bu’aa olaanaa ‘invastimantii’ galma misoomaa waaraa waliin wal-simu hawwachuun galmeessisteef Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii irraa badhaasa 2017 argatte.
Badhaasa Dhaabbati Mootummootaa waggaa waggaan biyyoota ‘invastimantii’ galma misoomaa waaraa waliin wal-simu hawwachuun bu’aa olaanaa galmeessisaniif kennu Itiyoophiyaa raawwii olaanaa A.L.A bara 2017tti galmeessisteef sadarkaa idil-addunyaatti badhaafamteetti.
Walga’ii Koomishinii Invastimantii Sadaasa 10, 2010 Siwiizarlaand Jenevaa keessatti taa’e irratti Dhaabbati Mootummoota Gamtoomanii biyyoota adda-duree waggichaa beeksiseera.
Kanaanis Koomishiniin ‘Invastimantii’ Itiyoophiyaa, Boordiin Invastimantii Morishiyas fi Kofaayidas Ispeen badhaafamtoota bara 2017 ta’aniiru.
Sirna badhaasaa dhaabbata Mootummootaa Gamtoomanii kana irratti Daayirektarri ‘Invastimantii’ Koonfiransii Daldalaa fi Misoomaa akka dubbatanitti, Itiyoophiyaa badhaasichaaf kan ishee qaqqabsiisan keessaa mootummaan invastimantii qulqullummaa qabu haala gurmaa’ee fi si’ataa ta’een hawwachuuni fi deggarsa kennuun hojilee raawwateeni.
Kanaanis galmi misoomaa waaraa akka milkaa’uuf gahee kallattii kan gumaachan sochiiwwan ‘piroojaktoota invastimantii’ haala milkaa’een raawwachuun danda’amuu eereera.
Keessumaa tarsiimoo misooma ‘industirii’ magariisaa biyyattii baafte milkeessuuf faalama irraa bilisa akka ta’anitti kan ijaaraman kan akka ‘Paarkii Industirii’ Hawaasaa keessatti abbootii-qabeenyaa alaa hawwachuun danda’amuun fi biyyoota kaaniifis hojiin fakkeenya ta’uu danda’u hojjatamuunsaa badhaasa kanaaf akka ishee ga’e eerameera.
Oduu wal-qabatuun, mootummaan Itiyoophiyaa hojiilee carraa hojii olaanaa uumuu dandeessisan hojjachuun dubartootaa fi dargaggoota fayyadamoo gochuun dhiibbaa hawaasummaa fi naannoof xiyyeeffannoo kennee hojjachuu isaafi jedhameera.
Mootummaan ‘invastimantii’ alaa olaanaa qulqullummmaa qabu hawwachuu kan dandeessisan sirreeffama immaataa fi hojimaataa raawwachuun hojii mul’atu hojjachuunsaa eerameera.
Badhaasa kana jilli Koomishinii Invastimantii Itiyoophiyaa Koomishinar Obbo Fitsum Araggaan hogganame, Siwiizarlaanditti Ambaasaaddara Abbaa-aangoo Guutuu kan ta’an fi Jeenevaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti fi dhaabbilee idil-addunyaa kaanitti ergamaa dhaabbataa kan ta’an Ambaasaaddar Nagaash Kibrat bakka argamanitti Sagantaa badhaasaa Magaalaa Jenevaatti qophaa’e irratti kenname.
Dhihoottis Baankiin Addunyaa immaammataa fi hojimaata bu’a qabeessa hojiitti hiikuun ‘invastimantii’ hawwachuun bu’aa olaanaa galmeessifteef badhaasa sadarkaa urjii ( 2017 Star Reformer Award) Mootummaa Itiyoophiyaa badhaasuunsaa kan yaadatamudha.
Kunis biyyattiin A.L.A bara 20125tti ‘industirii’ oomishaa Afriikaa keessatti wiirtuu adda-duree ta’uuf mul’ata qabattee jirtu milkeessuuf karaa sirrii qabattee akka jirtu agarsiisa dabalataati jedhameera.
Odeeffannoo kana kan arganne Koomishinii Invastimantii Itiyoophiyaa irraati.
Oduuwwan Biroo « Magaalota Itiyoophiyaa tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala’aa jijjiirama qilleensaaf mijataa ta’e isaan barbaachisa	Rakkoo piroojaktoota bishaanii Naannoo Oromiyaatti waggoota hedduuf lafarra harkifatan 34 furuuf hojjataan jira: Biirucha »